ပြည်သူတွေအတွက် ထောပတ်ထမင်းကြက်သားဟင်း မရမ်းသီးငါးပိချက် ပွဲ၂၀၀စာ ကုသိုလ်ဖြစ် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း – Cele Posts
ပြည်သူတွေအတွက် ထောပတ်ထမင်းကြက်သားဟင်း မရမ်းသီးငါးပိချက် ပွဲ၂၀၀စာ ကုသိုလ်ဖြစ် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အနုပညာရှင် တစ်ချို့လည်းပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်….။အခုလိုတက်ကြွစွာနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှု တွေကို လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ ဆိုရင် ရေဗက္ကာဝင်း တစ်ယောက်လည်း အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေဗက္ကာဝင်းဟာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်ခဲ့တဲ့ ရက်တည်းကစကာ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်အားဖြည့်နေတာလည်းဖြစ်သလို တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေလည်း လှူဒါန်းမှုတွေကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ် နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူမဟာ ဆက်တိုက် ဆိုသလို လိုအပ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီး လှူဒါန်းပေးနေ တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်….
အခုဆိုရင်လည်း ရေဗက္ကာဟာ သူမရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ “ဒီနေ့ စေတနာရှင်များ ဖြစ်ကြတဲ့ မမြမြအေး မThidar Dwyer မလီလီခိုင်တို့နဲ့ ပေါင်းပြီး ထောပတ်ထမင်း ကြက်သားဟင်း မရမ်းသီးငါးပိချက် ပွဲ၂၀၀ စာ ကုသိုလ်ဖြစ် လှူဒါန်းပါတယ်ရှင်…….” ဆိုပြီးရေးသားမျှ ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်……။ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အနုပညာရှင်တစ်ချို့လည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူတစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်….။အခုလိုတက်ကြွစွာနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှု တွေကို လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာဆိုရင် ရေဗက္ကာဝင်း တစ်ယောက်လည်းအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရေဗက္ကာဝင်းဟာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်ခဲ့တဲ့ ရက်တည်းကစကာ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာကိုယ်တိုင် ပါဝင်အားဖြည့်နေတာလည်းဖြစ်သလို တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေလည်း လှူဒါန်းမှုတွေကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူမဟာ ဆက်တိုက် ဆိုသလို လိုအပ်တဲ့အစားအသောက်တွေ ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီး လှူဒါန်းပေးနေ တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်…အခုဆိုရင်လည်း ရေဗက္ကာဟာ သူမရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ “ဒီနေ့ စေတနာရှင်များ ဖြစ်ကြတဲ့ မမြမြအေး မThidar Dwyer မလီလီခိုင်တို့နဲ့ ပေါင်းပြီး ထောပတ်ထမင်းကြက်သားဟင်း မရမ်းသီးငါးပိချက် ပွဲ၂၀၀ စာ ကုသိုလ်ဖြစ် လှူဒါန်းပါတယ်ရှင်…….” ဆိုပြီးရေးသားမျှ ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်……။
ပွညျသူတှအေတှကျ ထောပတျထမငျးကွကျသားဟငျး မရမျးသီးငါးပိခကျြ ပှဲ၂ဝဝစာ ကုသိုလျဖွဈ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ရဗေက်ကာဝငျး
ပရိတျသတျကွီးရေ…..မွနျမာနိုငျငံရဲ့ဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနေ အရပျရပျကွောငျ့ အနုပညာရှငျ တဈခြို့လညျးပွညျသူတှေ နဲ့အတူ တဈသားတညျး ရပျတညျကာ လူထုလှုပျရှားမှုတှကေို လုပျဆောငျနကွေတာဖွဈပါတယျ….။အခုလိုတကျကွှစှာနဲ့ လူထုလှုပျရှားမှု တှကေို လုပျဆောငျနကွေတဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲမှာ ဆိုရငျ ရဗေက်ကာဝငျး တဈယောကျလညျး အပါအဝငျပဲဖွဈပါတယျ။ရဗေက်ကာဝငျးဟာ လူထုလှုပျရှားမှုတှေ စတငျခဲ့တဲ့ ရကျတညျးကစကာ လှုပျရှားမှုတှမှောကိုယျတိုငျပါဝငျအားဖွညျ့နတောလညျးဖွဈသလို တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနလေညျး လှူဒါနျးမှုတှကေိုဆကျတိုကျပွုလုပျ နတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ သူမဟာ ဆကျတိုကျ ဆိုသလို လိုအပျတဲ့အစားအသောကျတှကေိုလညျး ကိုယျတိုငျခကျြပွုတျပွီး လှူဒါနျးပေးနေ တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျနျော….
အခုဆိုရငျလညျး ရဗေက်ကာဟာ သူမရဲ့ Facebookစာမကျြနှာမှာ “ဒီနေ့ စတေနာရှငျမြား ဖွဈကွတဲ့ မမွမွအေး မThidar Dwyer မလီလီခိုငျတို့နဲ့ ပေါငျးပွီး ထောပတျထမငျး ကွကျသားဟငျး မရမျးသီးငါးပိခကျြ ပှဲ၂၀၀ စာ ကုသိုလျဖွဈ လှူဒါနျးပါတယျရှငျ…….” ဆိုပွီးရေးသားမြှ ဝခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ……။ပရိတျသတျကွီးရေ…..မွနျမာနိုငျငံရဲ့ဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနေ အရပျရပျကွောငျ့ အနုပညာရှငျတဈခြို့လညျးပွညျသူတှနေဲ့အတူတဈသားတညျးရပျတညျကာ လူထုလှုပျရှားမှုတှကေို လုပျဆောငျနကွေတာဖွဈပါတယျ….။အခုလိုတကျကွှစှာနဲ့ လူထုလှုပျရှားမှု တှကေို လုပျဆောငျနကွေတဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲမှာဆိုရငျ ရဗေက်ကာဝငျး တဈယောကျလညျးအပါအဝငျပဲဖွဈပါတယျ။
ရဗေက်ကာဝငျးဟာ လူထုလှုပျရှားမှုတှေ စတငျခဲ့တဲ့ ရကျတညျးကစကာ လှုပျရှားမှုတှမှောကိုယျတိုငျ ပါဝငျအားဖွညျ့နတောလညျးဖွဈသလို တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနလေညျး လှူဒါနျးမှုတှကေို ဆကျတိုကျပွုလုပျနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ သူမဟာ ဆကျတိုကျ ဆိုသလို လိုအပျတဲ့အစားအသောကျတှေ ကိုလညျး ကိုယျတိုငျခကျြပွုတျပွီး လှူဒါနျးပေးနေ တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျနျော…အခုဆိုရငျလညျး ရဗေက်ကာဟာ သူမရဲ့ Facebookစာမကျြနှာမှာ “ဒီနေ့ စတေနာရှငျမြား ဖွဈကွတဲ့ မမွမွအေး မThidar Dwyer မလီလီခိုငျတို့နဲ့ ပေါငျးပွီး ထောပတျထမငျးကွကျသားဟငျး မရမျးသီးငါးပိခကျြ ပှဲ၂၀၀ စာ ကုသိုလျဖွဈ လှူဒါနျးပါတယျရှငျ…….” ဆိုပွီးရေးသားမြှ ဝခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ……။
ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းနေတဲ့ ညီညီမောင်
တိုက်ပွဲမှာကျရှုံးသွားတဲ့ လှိုင်သာယာက အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့ မိသားစုတွေဆီကို အလှူငွေများသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ထက်အောင်ရှိုင်း